Dagaal hal ruux ku dhintey oo mar kale kasoo cusboonaaday degaanka Bariga Baki « CEELBARDAALENEWS.COM
« Mudaharaadki Boorama iyo Halka uu Salka ku hayo.
War aan gun lahyn oo daandaansi ah oo kasocda Gabilay nala akhrista »
Dagaal hal ruux ku dhintey oo mar kale kasoo cusboonaaday degaanka Bariga Baki
Boodhka (C/bardaale)- Warar ay shabakada saylac.com ka heshay goobjoogayaal ku sugan aaga hore ee dagaalku ka dhacay ayaa sheegaya in maanta salaadii Duhur dagaal dhexmaray kooxdii dad qalatada ahayd ee maleeshiyada Ina Raage Qaate iyo dadka degaanka bariga Baki . Weerarkan oo ay soo qaadeen dablayda dadqalatada ahi ayaa la sheegay inuu ujeedadiisu ahayd inay xoolo ganacsi oo degaanka daaqayey ay dhacaan balse nasiib wanaag ay dadka degaanku ka warheleen ka dibna dufaac adag usii galeen.
Sida wararka nagu soo gaadheen dagaalkan maanta waxa ku dhintey nin ka mid ahaa dablaydii jidgooyada hada ka hor ku gawracday afarta marxuum ninkaas oo magaciisa la yidhaa Girise isla markaana ay xigto hoose yihiin qabqablaha dagaal ee aaga ceerbardaale Ina Raage Qaate.
Dagaalku waxa uu maanta ka dhacay degaanka Boodhka Galigalool oo katirsan degaano ay dhawrjeer maleeshiyadu xoolaha dadweynaha ku dhaceen. Boodhka Galigalool waxa uu magaalada Baki kaga beegan yahay koonfur galbeed waxaanu qiyaas ahaan magaalada Baki u jiraaa 5Mayl oo kaliya.
Wararka ayaa waxay intaa ku dareen in mudadii uu dagaalku socday ay gawaadhida saanad dagaal u siday maleeshiyadu ay soo dhaafi kari waayeen dooxa weyn ee Boodhka /Galigalool dooxaas oo ah dooxa weyn ee kusoo dhaca degmada Baki halkaasna ay dib uga noqdeen.
Dagaalkan oo socday mudo dhawr saacadood ah ayaa markii danbe la kala food qaadey dibna loo kala gurtey. Sida ay dad aaga hore ku sugani ay khadka telefoon ugu warameen shabakada saylac.com xoolihii ay damacsanaayeen in maleeshiyada ina raage Qaate dhacaan maanta umay suuro galin dadka degaankuna oo ka warhelay weerarkanina waxay awoodeen inay xoolahooda ka dufaacaan maleeshida caadada ka dhigatey inay xoolaha degaanka si isdaba jooga u dhacaan.
Boodhka Galigalool -Awdal Somaliland
This entry was posted on August 22, 2010 at 8:58 pm	and is filed under 1. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.